मोटरसाइकल खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना | घोराही उप-महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
GIS स्रोत नक्सा (घोराही उप-महानगरपालिका)
LGCDP कार्यक्रम अधिकृतको छनौट कार्यविधी तथा पाठ्यक्रम
जनसहभागीतामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम बारे सूचना ।
३८औं स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न
२० औं नगरपरिषद
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न भयो ।
Home » मोटरसाइकल खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना
मोटरसाइकल खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना
मोटरसाइकल खरिद कार्यको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिः- २०७६।०८।१८ गते
यस घोराही उपमहानगरपालिकाका लागि आवश्यक मोटरसाइकलहरु बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले सो सम्बन्धी कार्य गर्न मान्यता प्राप्त फर्म/कम्पनीहरुवाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही रितपुर्वक बोलपत्र आव्हान गरिएको छ ।
1. बोलपत्र फारम रु ३०००।(पछि फिर्ता नहुने गरि) तिरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनसम्म कार्यालय समयमा खरिद गर्न सकिने छ ।
2. बोलपत्र फारम खरिद गर्न फर्म/कम्पनीहरुले कम्पनि रजिस्ट्रेसन प्रमाणपत्र, भ्याट/प्यान दर्ता तथा नविकरण गरेको प्रमाणपत्र र आ. व.207५।7६ को कर चुक्ता प्रमाणित प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
3. बोलपत्रपत्र शर्त रहित केरमेट नभएको हुनुपर्नेछ । यदि केरमेट भएमा केरमेट भएको ठाउँमा बोलपत्र दाताको दस्तखत र छाप भएको हुनुपर्नेछ ।
4. तपशिलमा उल्लेखित धरौटी वापतको रकम यस कार्यालयको नाममा रहेको श्री नेपाल बैक लिमिटेड, घोराहीको धरौटी खाता –नं. 02703000000003000004 मा नगदै जम्मा गरेको सक्कल भौचर वा यस कार्यालयको नाममा मान्यता प्राप्त वाणिज्य बैंकले जारि गरेको ग्यारेन्टी(विड वण्ड) संलग्न हुनु पर्ने छ । प्रस्ताबकको Bid validity कम्तीमा 120 दिनको हुनु पर्नेछ।
5. कवोल अंकको दररेट अंक र अक्षरमा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ । केरमेट भएमा केरमेट भएको स्थानमा सहिछाप गर्नु पर्नेछ।दररेट रकम अंक र अक्षरमा फरक पर्न आएमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिईनेछ ।
6. एक फर्मको नाममा खरिद गरिएको बोलपत्र फाराम अर्को फर्मको नामबाट दाखिला गर्न पाईने छैन।
7. बोलपत्र खरिद गर्ने वा दाखिला गर्ने अन्तिम दिनमा बिदा परेमा विदा लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन सोहि अनुसार हुनेछ ।
8. खरिद भएको बोलपत्र फाराम सिलवन्दी गरी खाम वाहिर आफनो फर्मको नामथर, वतन र कामको विवरण स्पष्ट उल्लेख गरी सिलवन्दी गरी यस कार्यालयमा ३१ ‌औ दिनको १२ बजे भित्र दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ । दर्ता भएका बोलपत्रहरु सोही दिनको २ बजे यस कार्यालयम सरकारी प्रतिनिधी, फर्मको प्रतिनिधीहरुको रोहवरमा खोलिने छ । समयमा फर्मको वा निजहरुको प्रतिनिधी उपस्थित नभएमा पनि सिलवन्दी दरभाउपत्र खोल्न बाधा पुग्नेछैन । कारणवश सिलवन्दी बोलपत्र खरिद गर्ने ,दर्ता गर्ने तथा खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा कार्यालय खुलेको सोही समयमा हुनेछ।
9. बोलपत्र पूर्ण वा आंशिकरुपमा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहित हुनेछ।
10. अन्य कुराहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ वमोजिम हुनेछ। अन्य कुराहरु बोलपत्र फाराममा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ ।
11. थप जानकारीको लागि यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिने छ साथै यो सुचना घोराही उपमहानगरपालिकाको वेभसाइट www.ghorahimun.gov.np बाट समेत डाउनलोड गरी हेर्न सकिनेछ ।
ल.इ(मू अ क बाहेक)